Israel neBahrain vanobvumirana kusaina chibvumirano cherunyararo, vachisimbisa kudyidzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Israel neBahrain vanobvumirana kusaina chibvumirano cherunyararo, vachisimbisa kudyidzana
Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
United States, Israel neBahrain vazivisa nhasi muchibvumirano, kuti Humambo hweBahrain huchajoinha United Arab Emirates mukusaina chibvumirano cherunyararo nekumisikidza hukama hwekudyidzana neJuda State svondo rinouya.
Chirevo chekubatana ichi, icho chakapihwa nemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump paTwitter, chakataura kuti vatungamiriri veUnited States, Israel neBahrain vakaita nhaurirano parunhare masikati machena uye vakabvuma "kutanga kwehukama hwakazara pakati peIsrael nehumambo hwe Bhahareni."
"Kuvhura kutaurirana kwakananga uye hukama pakati penzvimbo mbiri dzakasimba pamwe nehupfumi hwemberi kuchaenderera mberi nekushandurwa kwakanaka kweMiddle East uye kuwedzera kugadzikana, kuchengetedzeka, uye kubudirira mudunhu iri," chirevo chakadaro.
Chibvumirano chekumisidzana kwehukama pakati peIsrael neBahrain chakauya mwedzi mumwe chete mushure mechibvumirano chakafanana pakati peIsrael neUnited Arab Emirates (UAE) chakaziviswa muna Nyamavhuvhu 13. Inoitawo Bahrain nyika yechina yeArabhu, mushure meEgypt, Jordan neUAE, kutanga. hukama hwekudyidzana neIsrael.
"Shamwari dzedu HURU mbiri Israel nehumambo hweBahrain vanobvumirana Chibvumirano cheRunyararo - nyika yechipiri yeArabhu kuita rugare neIsrael mumazuva makumi matatu!" Trump tweeted.
IUAE neBahrain, zvisinei, hazvina kumbobvira zvarwa hondo yekurwisa Israeri munhoroondo.
Chirevo ichi chakati zvakare Bahrain ichabatana nemhemberero dzekusaina chibvumirano pakati peIsrael neUAE yakarongwa munaGunyana 15 kuWhite House.
Sekureva kwechibvumirano cheIsrael-UAE, Israel inobvuma kumisa hurongwa hwayo hwekubatanidza matunhu eWest Bank.
Mutungamiri wePalestine Mahmoud Abbas akati chibvumirano pakati peUAE neIsrael "chibaya kumusana kwevaPalestine."
Abbas akadana nyika dzese dzeArabhu kuti vatevedze chirongwa cheArabic Peace Initiative, chakatangwa muna 2002, icho chinoti maArabu anokwanisa kugadzirisa hukama neIsrael mushure mekunge nyaya yePalestine yagadziriswa.